တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: July 2012
အေဒီ (၆) ရာစုနှင့် ယင်းမတိုင်မီ ရခိုင်ပြည်သုံး အက္ခရာ
Arakanese Alphabets Used in AD4 and Before It. u San Thar Aung
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 10:00 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:07 PM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:05 PM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 4:11 AM2comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:58 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:37 PM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:10 AM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:38 AM2comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:44 AM No comments:
ဒီချုပ်ရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပသော ၆၅ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားသည့် မိန့် ခွန်း
၁၉- ဇူလိုင်- ၂၁၂
ကျွန်မကဒေါက်တာဘွဲ့မရှိပါဘူး။ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပေးတယ် ဆိုတာဟာ ဒေါက်တာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို မသုံးသင့်ပါဘူး။ သုံးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ကျွန်မကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့ပဲ ရိုးရိုးဆက်ပြီးခေါ်သွားလို့ရပါတယ်။ ဒေါက်တာ အခေါ်ခံစေချင်ရင် စာမေးပွဲဖြေရတော့မ လိုဖြစ်နေပြီ၊ အားလုံးဒီလို အာဇာနည်နေ့မှာ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းရောက်လာတဲ့အတွက် ကျွန်မ၀မ်းသာပါ တယ်။ ကျွန်မတို့ အာဇာနည်နေ့ ကျင်းပတယ် ဆိုတာဟာ အခုနှစ်တင် မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကတည်းက ဘယ်လိုပဲ အခက်အခဲတွေ ရှိခဲရှိခဲ့ ကျွန်မတို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အာဇာနည်နေ့ကို ကျင်းပဖြစ်အောင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုကျင်းပရတဲ့အကြောင်းဟာ ကျွန်မတို့ အခြေခံအားဖြင့်တော့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းပဲ လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့က နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းကို အခြေခံပြီးတော့ ဒီလိုပွဲတွေကို ကျင်းပတာပါ။ အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ကို ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ပြန့်ပွားစေချင်လို့။ ဒီလို အာဇာနည် စိတ်ဓာတ်ပြန့်ပွားစေချင် တယ်ဆိုလို့ရှိရင် အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားတယ် ဆိုတာ ဟာကျွန်မ တို့နိုင်ငံမှာရှိရမယ်။ အများမလေးစားတဲ့ဟာကို ပြန့်ပွားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်မှ ခက်ပါတယ်။ ဒီတော့ကျွန်မတို့ အာဇာနည် စိတ်ဓာတ်က ဘာလဲဆိုတော့ ပြောနိုင် တာတွေက အမျိုးမျိုးပေါ့နော်။ ကျွန်မအမြင်မှာတော့ အာဇာနည် စိတ်ဓာတ်ကို အများက မြင် တာက သတ္တိရှိခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ မြင်ကြတာများတယ်။ သတ္တိရှိတာကို အာဇာနည် စိတ်ဓာတ်ပေါ့ ၊ ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့ လုပ်ရဲကိုင်ရဲတာကို အာဇာနည် စိတ်ဓာတ်လို့မြင်ကြတယ်။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 7:24 AM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 9:39 AM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 4:46 AM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 5:45 PM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:58 PM No comments:
ငါတို့ ဗိုလ်ချုပ် ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ ဦးပုကလေးရေ? What Our Bogyoke Did U Pukalay?
What our Bogyoke Did Upukalay ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ ဦးပုကလေး
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 3:42 PM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:48 PM2comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 10:45 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 4:08 PM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:31 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 11:15 PM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 11:22 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 2:45 PM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 11:44 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 11:36 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:29 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 10:58 AM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:38 PM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:32 PM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:39 PM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:00 PM 1 comment: